Hogaamiyaha Hir-shabeelle Cali C / laahi Xuseen Guudlaawe oo ka soo kicitimay magaalada jowhar ayaa la filayaa in uu goor dhaw soo gaaro magaalada muqdisho sida ay sheegeen xubno ka tirsan xafiiskiisa.
Guudlaawe, oo ku guuleystay doorashadii 11-kii November, 2020 ka dhacday magaalada Jowhar isla markaana ay saadaaliyeen siyaasiyiin inuu u tartami doono xilka, wuxuu wajahayaa diidmo ka dhan ah doorashada iyo hanjabaado uga imanaya xisbiyada mucaaradka.
Muxuu yahay ujeedka Cali Guudlaawe ee Muqdisho?
Ilo xog ogaal ah ayaa Axadle u sheegay in Hogaamiyaha Hir-shabeelle uu soo gaari doono magaalada muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha JFS mudane maxamed cabdulahi farmaajo, xildhibaano, senataro ka socda gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe, wafuud kala duwan oo caalami ah & ka qeyb galka shir. looga hadlayo in lagu gorgortamo ku guuldareysiga doorashada.
Cali waxbadan kuma lahan howlaha doorashada Soomaaliya, maadaama madaxweynihii isaga kahoreeyay Maxamed Cabdi Waare ay magacaabeen guddiga doorashada, kamana uusan xaadirin kulamada uu laqaatay DFS iyo hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada.
Ilo wareedyo kale ayaa Axadle u sheegay in Hogaamiyayaasha DFS ay u yeereen Hogaamiye Cali C / llaahi Xuseen Guudlaawe si ay ugala hadlaan sida laga yeelayo shaqsiyaadka ka soo horjeeda in mar kale loo doorto Hogaamiyaha Hir-shabeelle, muddo kordhinta Baarlamaanka iyo kuraasta gobolka Hiiraan.
axadle 5969 posts
Saadaalin: Mark Lawrenson ayaa saadaaliyay wareega